Nnukwu Himachal Holiday Tour | Kpọọ 91-993.702.7574 maka ịdebanye aha.
Nnukwu njem nleta Himachal
Himachal, ala nke na-eme ka mkpuru obi gi sie ike. N'ịbụ onye gọziri anya nke ọma mara mma, Himachal Pradesh bụ paradaịs onye nleta. Njem nleta ezumike ihu ọchị nke dị egwu ga-eme ka ị gaa njem nke ndụ. Trekking, rafting nke osimiri, ịrị elu nkume, ebe obibi, ncheta na ọtụtụ ihe ọzọ nwere ike ụtọ na Himachal, nke a na - enye gị ohere ịnweta mpaghara ahụ n'ụzọ dịgasị iche ma mee ka ncheta nke ị ji ndụ gị dum kpọrọ ihe. E wezụga ohere njem, enwerekwa ohere ịnweta ịma mma nke odida ala na Himachal. Na Amazing Himachal Holiday Tour bụ ụzọ kachasị mma iji nwee obi ụtọ n'ịdị ebube nke ala. Ebe a mara mma a na-eji ugwu whitecap ọcha dị mma, na-esi ísì ụtọ nke osisi pine, ebe mara mma. Ma ọ bụ na ị bụ ndị na-aga ezumike nwa ma ọ bụ na-achọ ka gị na ezinụlọ gị na-enwe ezigbo oge, ndị enyi na ezumike; ebe a na-etinye ihe maka mmadụ nile. Na-achọ ịma mma nke ugwu nta na ike ya dum na njem nleta Himachal Amazing. Ọnọdụ dị iche iche na-anọchi anya ya dị iche iche nke ụdị di iche iche na ederede na ịma mma mara mma. Ala Himachali nwere mmetuta nke na-eme ka ndi mmadu mara gburugburu uwa. Chọta ala a dị ịtụnanya na njem nleta njem nleta anyị mara mma.
Mmemme 10 nke ehihie | 150 njegharị
Kwa ụbọchị mgbe ụtụtụ gwụchara ma chọga Chnadigarh. Mgbe ị bịarutere Chandigarh nyefee maka nbanye. N'abalị na Chandigarh.
N'ụbọchị a mgbe ụtụtụ gasịrị, lelee ụlọ nkwari akụ ma gaa maka njem nlegharị anya na Chandigarh. Gaa na Nkume Ugwu. Ọnụ ụzọ na-enweghị atụ na-eduga ná ndokwa dị ịtụnanya, nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke a na-atụghị anya ya na nkume, nkume nkume, kpụfuru Chinaware, akpaghasị ọkpụkpụ ndị na-eme ka ọ dị mma, gbajie ma tụfuo nchara iko, ụlọ mkpofu, coal na ụrọ-niile juxtaposed ịmepụta ụwa ndị nrọ nke ụlọ eze, enwe, ndụ obodo, ndị inyom na ụlọ nsọ. E mesịa nyefee ọdụ ụgbọ elu Chandigarh / ọdụ ụgbọ okporo ígwè ebe njem ahụ ga-agwụ.